Job 39 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
39 “Ị̀ maara oge a kara aka mgbe ewu ọhịa nke na-ebi n’oké nkume ji amụ nwa?+Ị̀ na-ahụ mgbe nne ele na-amụ nwa+ n’ihe mgbu? 2 Ị̀ na-agụkọ ọnwa ole ha na-ebu afọ ime,Ka ị̀ maara oge ha ji amụ nwa? 3 Ha na-ehuru ehuru mgbe ha na-amụ nwa,Mgbe ha na-ewepụ ihe mgbu ha. 4 Ụmụ ha na-agbasi ike, ha na-anọ n’ime ọhịa buo;Ha na-apụ, ha adịghịkwa alaghachikwute ha. 5 Ònye hapụrụ ịnyịnya ọhịa+ ka ọ gawara onwe ya,Ọ̀ bụkwa onye tọpụrụ agbụ e kere ịnyịnya ibu ọhịa, 6 Bụ́ nke m nyere ọzara ka ọ bụrụ ụlọ ya,Nyekwa ala nnu+ ka ọ bụrụ ebe obibi ya? 7 Ọ na-achị ọgba aghara dị n’obodo ọchị;Ọ dịghịkwa anụ mkpọtụ onye na-achụ nta+ na-eme. 8 Ọ na-akpagharị n’ugwu na-achọ ahịhịa ọ ga-ata,+Na-achọgharịkwa ụdị ahịhịa ndụ+ ọ bụla. 9 Atụ́ ọ̀ ga-achọ ijere gị ozi,+Ka ọ̀ ga-anọbọ chi n’akụkụ ihe i ji etinyere anụ ụlọ nri? 10 Ị̀ ga-eji ụdọ kegide atụ́ n’ebe ị na-akọ ihe,Ka ọ̀ ga na-etiri ala+ na-eso gị n’azụ? 11 Ị̀ ga-atụkwasị ya obi n’ihi na ike ya dị ukwuu,Ị̀ ga-ahapụrụ ya ọrụ i kwesịrị ịrụ? 12 Ị̀ ga-enwe nchekwube na ọ ga-ewelatara gị ihe ubiNakwa na ọ ga-ekpokọta ihe n’ebe nzọcha mkpụrụ gị? 13 Nne enyí nnụnụ ò jiriwo ọṅụ tie nku ya,Ka ọ̀ bụ nku na ábụ́bà ụgbala+ ka o nwere? 14 N’ihi na ọ na-ahapụ àkwá ya n’ala,Ọ bụkwa n’ájá ka ọ na-eme ka ha nweta okpomọkụ, 15 Ọ na-echefu na ụkwụ nwere ike ịzọpịa ha,Ma ọ bụ na anụ ọhịa nwere ike ịzọ ha ụkwụ. 16 Ọ na-emesi ụmụ ya ike, dị ka à ga-asị na ọ bụghị ya mụrụ ha+—N’efu ka ọ na-adọgbu onwe ya n’ọrụ n’ihi na ọ naghị atụ ụjọ. 17 N’ihi na Chineke emewo ka o chefuo amamihe,O nyeghịkwa ya nghọta.+ 18 N’oge ọ na-eti nku ya n’elu,Ọ na-achị ịnyịnya na onye na-agba ya ọchị. 19 Ị̀ pụrụ inye ịnyịnya ike?+Ị̀ pụrụ ime ka ọzà nke na-eme ụṅara dịrị n’olu ya? 20 Ị̀ pụrụ ime ka ọ na-amali elu dị ka igurube?Ịdị ebube nke iku ume ya na-emenye ụjọ.+ 21 Ọ na-azọ ụkwụ ya ike ike+ na ndagwurugwu, jirikwa ike ya na-awụli elu;Ọ na-apụ izute ihe agha.+ 22 Ọ na-achị ihe na-emenye ụjọ ọchị, ọ dịghịkwa atụ egwu;+Mma agha adịghịkwa eme ka ọ gbaghachi azụ. 23 Akpa akụ́ na-eme mkpọtụ n’akụkụ ya,Tinyere ihu ube na árọ̀. 24 Ọ na-eme mkpọtụ, jirikwa iwe na-awụ ọsọ,Ọ dịghịkwa ekwe na ọ bụ ụda opi ka ọ na-anụ. 25 Ozugbo a fụrụ opi, ọ na-asị Ehee!Ọ na-anọkwa n’ebe dị anya anụ ísì agha,Mkpọtụ nke ndị isi agha na mkpu agha.+ 26 Ọ̀ bụ n’ihi nghọta gị ka agụ nkwọ ji efeli oké elu,Ka o jikwa na-agbasapụrụ ifufe si n’ebe ndịda nku ya? 27 Ka ọ̀ bụ iwu i nyere mere ugo+ ji efeli elu,Ọ̀ bụkwa ya mere o ji na-akpa akwụ́ ya n’ebe dị elu,+ 28 Meekwa ka ọ na-ebi n’oké nkume, na-anọkwa n’abalịN’ọnụ ọnụ nkume dị elu nakwa n’ebe siri ike ọbụba? 29 Ọ bụ ebe ahụ ka ọ na-esi aga achọ nri;+Anya ya na-erukwa n’ebe dị oké anya. 30 Ụmụ ya na-aṅụ ọbara;Ọ bụkwa n’ebe ozu ndị e gburu egbu dị ka ọ na-anọ.”+